Imigomo nemibandela elawula isithembu esisemthethweni
UMNUZ Musa Mseleku namakhosikaze akhe abazakhele udumo ngohlelo oluveza impilo yabo emshadweni wesithembu. Isithombe : FACEBOOK/MUSA MSELEKU
LUNGILE LANDELA | February 26, 2020
UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika uqinisekisa amalungelo omphakathi aqhakambisa usikompilo lwabo. I-Recognition of Customary Marriages Act 120 yango-1998 yenza kube semthethweni ukushada ngokwesiko kuphinde kuvumeleke ukuthatha isithembu.
INingizimu Afrika inezinhlobo ezintathu zemishado:
a) I-Marriages Act 25 of 1961
Ingamele umshado wobu­lili obungafani kubantu abaneminyaka engaphezu kuka-18, abavumelane ukuthi abashade nabashadile ngenkathi bengena emshadweni.
Lolu hlobo lomshado alunayo imibandela eminingi, inqobo nje uma beshadiswe ngumuntu onelungelo lokushadisa. Iningi labefundisi linaleli gunya. Lo mshado waziwa ngabaningi ngokuthi wumshado omhlophe.
b) I-Civil Union Act 17 of 2006
Ingamela umshado walabo abathandana nobulili obufana nobabo, inqubo nje nabo uma beneminyaka engaphezu kuka-18, bevumelene ukuthi bafuna ukushada.
c) I-Recognition of customary marriages act 120 of 1998
Ingamela umshado wesintu, kuphinde kube iwona kuphela umthetho ovumela ukuthi kushadwe isithembu. Kunemibandela okumele ibe khona ngaphambi kokuthi umshado uthathwe njengosemthethweni.
Kumele nibe neminyaka ewu-18 noma ngaphezulu.
Kuvunyelwane ukuthi kuzoshadwa ngokwesintu, ngokomthemtho weRecognition of Customary Marriages Act 120 of 1998.
Kuxoxiwe ngomshado, lapho kujwayele ukuthi kube yizingxoxo zelobolo.
Kuvunyelwane ngokuthi abagananayo bangena emshadweni wesintu noma kubhiyozwe ngendlela ehambisana nokukhombisa ukuthi sekushadiwe.
I-Matrimonial Property Act 88 of 1984 wumthetho obeka imigomo esetshenziswa ukulawula lezi zinhlobo zemishado:
Umongo wale migomo wukulawula indlela umthetho nabangaphandle komshado ababheka ngayo ukuthi izimpahla nezikweletu okukabani ngesikhathi kusashadiwe, uma nehlukanisa noma uma kukhona odlulayo emhlabeni.
In-Community of Property:
Lo mgomo uthi konke okuzuziwe nezikweletu ezenziwe ningakashadi kungokwenu ngokuhlanganyela. Konke enikuzuzile nezikweletu ezenziwe senishadile kungokwenu ngokuhlanganyela. Kafishane nje, okwami okwakho nokwakho okwami.
Konke okuzuzile kulo mshado nezikweletu ozenzile ngesikhathi ningakashadi kohlala kungokwakho. Sohlanganisa kuphela izimpahla nezikweletu esizithole sesishadile sikwengamele ngokulinganayo.
Esikuthole singakashadi kulo mshado noma sesishadile kohlala kungokwethu ngokuhlukana.
Ubufakazi bokuthi abashadile, bakhethe muphi umgomo olawula umshado wabo, kutholakala kwi-Antenuptial Contract. Ihlala e-deeds office, ibhaliswa kummeli oyiNotary. Ikhombisa ukuthi kukhethwe kanjani kungakangenwa eshadweni.
Izindlela zokwenza isithembu esisemthethweni:
Thola ummeli ozokweluleka, uyena ozohlahla indlela yokuqinisekisa ukuthi umshado wesithembu usemthetheweni.
Kube nezingxoxo zelobolo.
Kuyavunyelwana, kuqoshwe phansi bese kusayinwa ukuqinisekisa okuvunyelwane ngakho.
Okubalulekile kakhulu wukuthi kuqoshwe phansi okumele kwenziwe kwaphothulwa, kuyoba yinkomba yokuthi sekushadiwe.
Ukusayinwa kwe-Antenuptial Contract ezekhombisa ukuthi kukhethwe umgomo we-Out of Community of Property without accrual. Iyona kuphela esebenzayo uma ufuna ukuthatha isithembu.
I- Antenuptial Contract ibhalwa wummeli oyi-Notary e-Deeds Office, ngaphambi kokugujwa komshado.
Ubhalise umshado wakho eMnyangweni wezaseKhaya.
Umthetho uvikela amalungelo aqhakambisa amasiko. Okubalulekile wukuwulandela uwuhloniphe umthetho.
Sikhumbule izinhlobo zemishado nemigomo elawula umshado ayihlanganiswa, uma unesifiso sokushintsha inhlobo noma umgomo olawula umshado wakho, inkantolo kuphela enegunya lokukhipha isinqumo sokuthi umshado mawushintshwe.
Yingakho kubalulekile ukuthi ngaphambi kokuthatha isinqumo sokushada, uxhumane nommeli ukuze uzolulekwa ngendlela efanele.
* UZikalala unguMqondisi weZikalala Attorneys